आखिर किन मधेश झर्दैछन् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र - ।। Naya Kuro ।।
२७ फाल्गुन २०७५, सोमबार १७:३० March 11, 2019 Naya KuroLeaveaComment on आखिर किन मधेश झर्दैछन् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
काठमाडौं – मधेशको राजनीतिक उथलपुथल भइरहेको बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मधेशको भ्रमणमा निस्किने तयारीमा छन् । पूर्व राजाका सम्बाद सचिव फडिराज पाठकले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गरी पूर्वराजाले २९ फागुनदेखि भ्रमण सुरु गर्ने जानकारी दिएका छन्।
यद्यपी, पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा पूर्वराजाको पूर्वी तराई भ्रमणको कार्यतालिका उल्लेख छैन, उनले स्थगित भ्रमण धनुषाबाट सुरु हुनेमात्र जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार, उनले जनकपुरधामलाई केन्द्र बनाएर पूर्वी तराईका चार जिल्लाका धार्मिक केन्द्रहरुमा पुग्नेछन्।
२९ फागुनमा जनकपुरधाम पुग्ने उनी त्यहाँ जनकपुर महानगरपालिका–२३ स्थित होटल सिताशरणमा बस्नेछन्।
पूर्वराजाको पूर्वी तराई भ्रमणका लागि होटलका ८ वटा कोठा यसअघि नै बुक गरिसकिएको छ। स्रोतका अनुसार करिव १ दर्जनका लागि ती कोठा बुक गरिएका हुन्। राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, सिके राउतको रिहा र त्यसपछि ११ बुँदे सहमतिलगायतको विषयले मधेशको राजनीतिक तातिरहेको बेला पूर्व राजा शाहा मधेश भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन । भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ ।
शाह पाँच दिने मधेश भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सचिवालय स्रोतका अनुसार उनले फागुन २९ गतेदेखि मधेश भ्रमण थाल्नेछन् । २९ गते जनकपुरमा बास बसेर उनी फागुन ३० गते सर्लाहीको मलङ्गवा जाने कार्यक्रम छ । त्यहाँ उनले दुर्गा मन्दिरमा पूजापाठ गर्नेछन् । त्यहाँबाट उनी बास बस्न जनकपुर नै फर्किने छन् । यस्तै चैत १ गते उनले जानकी मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । जनकपुरबाट उनी चैत २ गते उदयपुरको गाइघाट जाने छन ।
गाइघाटमा राधाकृष्ण मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने ३ गते सप्तरीको सखडा भगवतीको दर्शन गरी उनी झापा जाने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि गत फागुन २२ गते हुने भनिएको उनको मधेस भ्रमण आमा रत्नको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि स्थगन भएको थियो । ज्ञानेन्द्र शाहको मधेश भ्रमण धार्मिक भनिए पनि जनमत बुझ्ने तयारी रहेको बताइएको छ । मधेश भ्रमणका बेला पूर्व राजा शाहले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क हवाईसेवा, वडावडामा हेलिप्याड
१२ श्रावण २०७६, आईतवार १२:१६ July 28, 2019 Naya Kuro
के कारणले पित्तथैलीमा पत्थरी हुन्छ ? लक्षण के–के हुन् ? हेर्नुहाेस
१२ मंसिर २०७६, बिहीबार ०६:४७ November 28, 2019 Naya Kuro